နေအိမ်> ထုတ်ကုန်များ> LED မီးအလင်း> : D စီးရီးလမ်းအလင်း> D Series 240w LED Street Light
မီးအိမ်ပစ္စည်းများ: Die-casting Aluminium + PC ကို
1. Universal ဗို့အား AC100-277V 50 / 60Hz ။
အဆိုပါကရိယာများအတွက် 2. 130lm / W ။
အဆင့်မြင့် SMD3030 ချစ်ပ်များကိုအသုံးပြုခြင်း။
၅။ High Power Factor> 0.9၊ အနိမ့် THD ယာဉ်မောင်း။
6. ရိုးရှင်းသောအနက်ရောင်အသွင်အပြင်၊ မျက်နှာပြင် anodized၊
၇။ ထူးကဲသော Optics ဒီဇိုင်းသည်အလင်းအသုံးပြုမှုနှင့်ညီမျှမှုကိုများစွာတိုးတက်စေသည်။
0-10V Dimmable, Photocell Sensor, Microwave Motion Sensor ဖြင့်ရရှိနိုင်သည်။
၉။ ဖုန်ထူပြီးရေစိုခံနေသော IP65 ။
10.5နှစ်အာမခံ။
မြင့်မားသောတောက်ပသောစွမ်းဆောင်နိုင်မှု၊ 130lm / W အထိ - အရည်အသွေးမြင့်မားသော PC ပစ္စည်းမှန်ဘီလူး၊ အမျိုးအစား၊ ရောင်ခြည်ထောင့်မရှိ၊ တောက်ပမှုမရှိ။
Standard Photocell NEMA connector သည်မိုat်းမလင်းမှီအချိန်တွင်အလင်းကိုအလိုအလျောက်ဖွင့်ပေးသည်။ မင်းရဲ့စွမ်းအင်ကိုဘယ်ကကယ်တင်မလဲ
မော်ဒယ်နံပါတ်။ MSL-D100 MSL-D150 MSL-D200
မွာ / အရွယ်အစား 4.7kg/543*317*75mm 4.8kg/543*317*75mm 5.6kg/663*317*75mm
Luminous Flux > 13000LM > 19500LM > 26000LM
မော်ဒယ်နံပါတ်။ MSL-D240 MSL-D300
ပါဝါ 240W 300W
မွာ / အရွယ်အစား 6kg/663*317*75mm 6.8kg/785*317*84mm
Luminous Flux > 31200LM > 39000LM
Beam Angle TYPE Ⅱ, TYPE Ⅲ, TYPE Ⅴ အိုင်ပီအဆင့် IP66
ပစ္စည်း Die-casting Aluminum + PC အော် >70
သက်တမ်း 50000h LED မီးခွက် SMD 3030
Luminous flux 130lm/w အာမခံချက် ၃ နှစ်